Somaliya oo dacwad kulul ka gudbisay diyaarad Kiiniya ka timi - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Somaliya oo dacwad kulul ka gudbisay diyaarad Kiiniya ka timi
Dawlada Somaliya ayaa dacwad ka gudbisay diyaarad Kiiniya ka timi oo si toosa uga degtay Kismaayo. Dawlada Somaliya ayaa bishii hore soo saartey in diyaarad kasta oo ku socota ama ka duuleysa Kismaayo ay soo marto Muqdisho.
Ciidanka Kiiniya ayaa daldasha kheyraadka Somaliya gaar ahaan deegaanada ay joogaan. Waxa intaas dheer inay si qotodheer ugu dhex jiraan siyaasada Somaliya ayagoo si cad ula safan Axmed Madoobe.
”Somaliya dhulka wey soo dhigi kartaa diyaaradaha xamuulka oo dhan laakiin ma rabto inay heerkaas gaarto ayuu yiri Cali Calasow oo jooga Muqdisho. Diyaarada maanta soo duushey waxay sidey horjoogeyaal hore fashilmey oo uu ku Jiro Shariif Xasan iyo horjooge C/kariin Xuseen oo lagu ilaalin jirey Cadaado.
Axmed Madoobe ayaa raba inuu is caleemo saaro xili uu hareer maray nidaamka dawladnimo ee u dejisan dalka ayna dhicina dib u heshiisiin loo sameeyay beelaha degan Jubooyinka. Dawlada ma aqoonsana hadduu is caleemo saaro iyo haddii kalaba waxase Somaliya uga daran Kininiya oo Kismaayo ku haysa ayuu raaciyay Cali Calasow.
Somaliya ayaa dacwad u gudbisay xiriirka hawada caalamiga maadaama diyaarada Kiiniya leedahay si toosa u fadhiisatey Kismaayo. Diyaaradan ka diiwaan gashan shirkada Jubba Airways ayaa xarunteedu tahay KIINIYA.
Dacwadan Somaliya ayaa imaanaysa ayadoo Kiiniya rajaynaysa in hal sano loogu daro dooda dacwada badda oo la filaayay inay dhacdo bisha dambe laakin hadda maxkamada laga sugayo go’aan cusub iyo in laga diido Kiiniya.
”Diyaaradaas waxa sugeysa ganaax iyo in laga mamnuuco dhamaan dalka.